Dowladda oo safiir u magacawday London - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Dowladda oo safiir u magacawday London
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 19 Abriil, 2013, 01:39 GMT 04:39 SGA
Dowladda Soomaaliya ayaa safiirka Soomaaliya ee UK u magacawday Maxamed Cabdullaahi Cali Sanbalolshe oo horey mar wasiir uga ahaa dowladdii KMG ee Soomaaliya. Waa safiirkii ugu horreeyay tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991.
Cabdullaahi Maxamed Cali safiirka cusub ee Soomaaliya ee UK
Dowladda Soomaaliya ayaa safiirka Soomaaliya ee UK u magacawday Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo horey mar wasiir uga ahaa dowladdii KMG ee Soomaaliya.
Shir ay yeesheen Golaha wasiirada ee dowladda oo uu shir guddoominayay Raiisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay magacaabista Safiirka Soomaaliya ee London, sida uu saxaafadda u sheegay wasiirka ku xigeenka warfaafinta Ibraahin Yaroow Isaaq.
Waa markii ugu horreysay ee dowlad Soomaaliyeed ay safiir u soo magacawdo dalkan Britain tan iyo markii ay burburtay dowladdii Soomaaliya.
Safiirka cusub ayaa horey wasiirkii Amniga Qaranka uga ahaa dowladdii KMG ee Cabdirashiid Cumar Sharmarke.